ပခုက္ကူနည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်ကြီးကို နှုတ်ဆက်ပြီးနောက် . . . | Saw San
ပခုက္ကူနည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်ကြီးကို နှုတ်ဆက်ပြီးနောက် . . .
posted in bye bye, gtc, GTU, my think, pakokku, pku gtu, pku tu, tu pakokku on February 23, 2011 by sawsan
2006 လ လယ်လောက်မှာ AGTI (EP)နဲ့ ကျောင်းပြီးတာ။ ကျောင်းပြီးတော့ အိမ်မှာ ယောင်ဝါးဝါးရယ်.. ၊
EP နဲ့သာ ကျောင်းပြီးတာ Testra တောင်ကောင်းကောင်းစမ်းတက်တာ မဟုတ် 😉 ကျောင်းစာကလည်း V=IR ဒါပဲ မှတ်မိတော့တယ် ဟား..။
အိမ်မှာ ပျင်းတာနဲ့ စာအုပ်တွေပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ စာတော်တော်ဖတ်ဖြစ်တော့ ဘာဖြစ်လာလဲ စာရေးဆရာဖြစ်ချင်လာတာပေါ့။ ကျနော့ ညီလေး (10)တန်းရောက်တော့ ညီလေးအတွက် ရေးပေးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် Youth မဂ္ဂဇင်းမှာပါလိုက်သေးတယ်။ အတော်ပျော်သွားတယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို
‘Bring the need.. Give the brings’
– Listen to the teaching share
– Interest with great attention
– Unterstant as thinking
– Become skillful from exercise
– Share with applying.
composed by saw san
ဒီကဗျာလေးဗျ မြန်မာလိုရေးပြီးမှ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတာ။
အဲ့လိုနေရင်း ၆ လ၊ ရ လ လောက် အချိန်ကုန်သွားတယ်။
2007 ခုနှစ်၊ ၂ လပိုင်းလောက်မှာ SAE ရာထူးနဲ့ နေပြည်တော်က စာမေးပွဲဖြေဖို့ခေါ်လို့ သွားဖြေလိုက်သေးတယ်။
သိပ်စိတ်ဝင်စားလို့တော့ ဟုတ်ဘူး၊ စာမေးပွဲအောင်အောင်လို့ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ လျှပ်စစ်နဲ့ ပါတ်သက်တာတွေ အတော်ဖတ်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကံကောင်းတယ်ပြောရမယ် စာမေးပွဲက မအောင်။ အဲလိုနဲ့ စာအုပ်ဆိုင်နဲ့ အိမ်နဲ့ကြားမှာ စာရေးဆရာရူးရူးပြီး ၂ လလောက် အချိန်ပေးလိုက်ရပြန်တယ်။
2007 ခုနှစ်၊ ၄ လပိုင်း ရ ရက်နေ့မှ စပြီး Computer Basic သင်တန်းတက်ဖြစ်တယ်။ အိမ်နားက စာစီစာရိုက်ဆိုင်လေးမှာ ဆရာ့နာမည်က ဦးကျော်မြင့်ဝင်း အတော်စေတနာ ထားတက်ပါတယ်။ ကျနော်တက်နေတာ Basic ကို ဟိုမေးဒီမေး သိချင်တာတွေ အကုန်လျောက်မေးရင် ဆရာကလည်း ပြောပြ၊ သင်ပြ၊ စာအုပ်တွေလည်း ဖက်ရင်းပေါ့..
၃ လပြည့်လို့ Basic သင်တန်းလည်း ပြီးရော Basic အပြင် တခြားကွန်ပျုတာ ပညာတွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မဟုတ်ပေမယ့် Window တင်တာ (ကျနော်လျောက်ကလိတတ်မှန်းသိလို့
ဒါကို သင်ပေးလိုက်တာဖြစ်မယ် 🙂 ) Computer Maintenance ပိုင်းတစ်ချို့၊ တစ်ခြား သိသင့်သိထိုက်တဲ့
ဗဟုသုတလည်း ရှိနေပြီပေါ့ဗျာ။ ပြောရရင် ကွန်ပျုတာကို ကလိဖို့ အကြောက်အလန့်မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့။ software တွေလည်း အတန်အသင့်စုံအောင်သုံးပီပေါ့။ သင်တန်းပြီးပေမယ့်လည်း ကျနော်သိချင်တာတွေက အများကြီးရှိနေသေးတော့
ဆရာအလုပ်လုပ်တဲ့နားမှာပဲ ခဏခဏသွားနေပြီး သိချင်တာတွေ မေးရင်း၊ ညပိုင်းမှာလည်း ဆရာအိမ်က ကွန်ပျုတာဂျာနယ်၊PC World၊ကွန်ပျုတာ မဂ္ဂဇင်း တွေကို 2000 ခုနှစ်လောက်ကစပြီး
နောက်ဆုံး ဆရာဝယ်သမျှကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အကုန်လုံးတော့ ဟုတ်ဘူးပေါ့ ကျနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းလေးတွေ ရွေးရွေှးပြီးဖတ်တာပေါ့။
သင်တန်းပြီးလို့ ၁ လခွဲလောက်ရှိဦးမယ်။ ဆရာ့အကူအညီနဲ့ ကြံခင်း-ပခုက္ကူရထားလမ်းစီမံကိန်းမှာ အလုပ်ရတယ်။ အလုပ်ထဲရောက်လို့ ၁ လလောက်နေတော့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ AutoCAD, 3D တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
2007 ခုနှစ် ၉ လပိုင်းလောက် ကျနော်တို့ ပခုက္ကူမှာ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် စဖွင့်လာတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ပြီး 10 ရက်လောက်ထိ ကျနော် အဲ့ဆိုင်ကို မရောက်သေးဘူး။ သွားဖို့လည်းမရဲ၊ သွားရကောင်းမှန်းလည်းမသိ၊
အင်တာနက်နဲ့ပါတ်သက်လို့ ဘာမှ ရေရေရာရာ မသိတာပါ။ တစ်ရက် ဆရာနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်လိုက်သွားတယ် ပထမဆုံးအင်တာနက်ဆိုင်ကို ရောက်ဖူးခြင်းပဲ ကျနော့စိတ်ထဲမှာ နဲနဲတော့ ကြောက်နေတယ်။
ကွန်ပျုတာနဲ့ပါတ်သက်လို့ အကြောက်အလန့်မရှိ ကလိရဲပြီထင်ထားတာ။ အင်တာနက်ဆိုင်ထဲမှာ ကျနော်လန့်နေတယ်။ ကျနော်ဘာမှ မသိသေး၊ အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။
ဆရာ့ ဘေးနားမှာ ကပ်ထိုင်ပြီးဆရာ သုံးတာထိုင်ကြည့်နေရတယ်။ နောက် ၂ ရက်လောက်နေတော့ ကျနော်ဘာသာ တစ်ယောက်ထဲ အင်တာနက်ဆိုင်ကိုသွားတယ်
ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံရင်ဆိုင်ခြင်းပေါ့ သိပ်တော့မကြောက်တော့ဘူးပေါ့။ ဒီတစ်ခါ သုံးမယ်ဆိုပြီး ကွန်ပျုတာ တစ်လုံးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ ဆိုင်ထဲမှာ ကျနော် ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းရောက်နေတာ။
သူငယ်ချင်းက ကျနော့ကို မြင်သွားပြီး..
“ဟာ စောစံ အင်တာနက်လာသုံးတာလား”
သူငယ်ချင်းက chat နေပုံရပါတယ် ဒါပဲမေးပြီးပြန်ထိုင်သွားတယ်။ ခဏနေတော့ ထပ်မေးတယ်
” စောစံ အကောင့်ရှိတယ်မို့လား ငါ add ထားမယ်လေ”
သွားပြီ ကျနော်ဘာပြောရမှန်းမသိ။ အဲ့တုန်းက အကောင့်ဆိုတာလည်းဘာမှန်းမသိ add ထားမယ်ဆိုတာလည်း ဘာပြောမှန်းမသိ။
ကျနော်အမြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ကျနော်မသိတဲ့ မေးခွန်းတွေကြီးခေါင်းထဲမှာ.. ဘေးမှာလည်း ကျနော်လို လူငယ်တွေနဲ့ ကျနော်ဘာပြန်ပြောရမလဲ?? စဉ်းစားနေတုန်း
” စောစံ ပေးလေ account ငါ add ထားမလို့ ရှိတယ်မို့လား”
” ငါ့ အကောင့်လား”
” မရှိတော့ဘူးကွ” ” ငါအသစ်ထပ်လုပ်ရမှာ”
“ဟင် အကောင့်က ဘာဖြစ်သွားလို့လည်း”
” အကောင့်က ရုံးက ကွန်ပျုတာထဲမှာ ထည့်ထားတာကွာ တစ်နေ့က virus ကိုက်တာနဲ့ Format ရိုက်ပြီး window ပြန်တင်လိုက်တာ ပါသွားတယ်ထင်တယ်”
” မရှိတော့ဘူးကွ” ကျနော်လည်း အဲ့လို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောလိုက်ရော သူငယ်ချင်းခမျာ မျက်လုံးလေးအဝိုင်းသားနဲ့..
ကျနော်လည်း အရှိန်ရနေပြီမို့ ထပ်ပြောလိုက်တယ်။
” အေး ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မပါခဲ့တာ” ဘေးက လူတွေကလည်း ကျနော်ပြောတာကို စိတ်ဝင်စားလာတယ်ထင်တယ်။
ကျနော့ကို ကြည့်နေကျတယ် တအံ့တဩ.. 🙂
အဲ့တုန်းက အကောင့်ဆိုတာကို ကွန်ပျုတာထဲမှာ သိမ်းထားလို့ရတဲ့ အရာတစ်ခုထင်နေပုံရတယ်၊ ကြည့်စမ်း အဲ့လောက်တောင် ညံတာ 🙂 ။
ဒါနဲ့ ကျနော့သူငယ်ချင်းလည်း ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ဘူး အကောင့်သစ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လုပ်ပေးတာ။ အခု အဲ့အကောင့်လေးပဲ အဓိကသုံးဖြစ်တယ်။ အမှတ်တရပေါ့လေ 🙂 ဒါပဲဗျာ ဟိုတုန်းကအကြောင်းလေးတွေမှတ်သားဖြစ်တယ်ဆိုရုံပါ။
← Window System ရဲ့ Services တွေအကြောင်းကို လေ့လာခြင်း
Photo တွေကို animation ပြုလုပ်ခြင်း →